Adobe wuxuu ku siinayaa meeshaad ka tageyso seddexdan xirmadood ee bilaashka ah ee astaamaha loogu talagalay XD | Abuurista khadka tooska ah
Adobe ayaa noqday shirkadda aasaasiga ah ee naqshadeynta mahadsanid barnaamijyadeeda horumarsan iyo hal abuurka 'Cloud Cloud' oo aan ku sii wadi karno inaan ku sawirno kiniinkeena garaafka, wax ka bedelno fiidiyow leh 'Premiere' ama soo-saar ka dib oo leh Adobe Effects. Saddex tusaale oo cad oo noocyo badan oo qalab ah oo maareynaya inay wax soo saarkeenna gaarsiiyaan heerar aad u sarreeya.
Markan, iyadoo ay ugu wacan tahay ka qeybgalka Adobe ee daabacaadda Yurub ee Awwwards, oo ah dhacdo ugub ah oo naqshadeynta UX / UI ah, waxay soo bandhigtay wadashaqeyn lala yeesho seddex naqshadeeye halyeey: Lance Wyman, Anton & Irene iyo Büro Burburin. Wadashaqeyn ku saleysan sameynta seddex xirmo astaan ​​gaar ah oo loogu talagalay Adobe XD.
Qalab taxane ah oo ku habboon in loo noqdo barbar dhig naqshadda astaanta hadda jirta oo markaa geyn mid ka mid ah shaqooyinka ama mashaariicda mustaqbalka ee aan geli doonno. Astaamahan waxaa loo geyn karaa "Cloud Cloud" Cloud Cloud si ay ugu adeegsadaan dhammaan barnaamijyada aan dooneyno.
Seddex xirmo oo isla imaanaya isla mar ahaantaana ah casriyayn weyn oo ogolaaneysa isdhexgal buuxa si loo jiido oo loo dhigo vectors-ka maktabadda CC goobta shaqada; xitaa isbeddelada la adeegsaday waa la isku dhejin doonaa.
Dhammaan saddexda xirmooyin waxaa abuuray Lance Wyman, oo caan ku ah hanashada hannaankiisa deegaan ahaaneed; Anton & Irene, labada ka mid ah Naqshadayaasha UX ee leh macaamiisha sida Google, Wacom iyo HTC; iyo Büro Destruct, oo ah istuudiyaha hormuudka u ah macaamiisha sida Swatch, Pebble iyo kuwa kale oo badan.
Si aad u hesho saddexda xirmo waad awoodaa soo dejiso tijaabada 7 maalmood ee bilaashka ah ee Adobe XD, si loo helo xiriiriyahan inaad kala soo baxdo oo aad gujiso mid kasta si uu kuugu jiro kombuyuutarkaaga. Hadda waad gujin kartaa iyaga si aad ugu tagto koontada 'Cloud Cloud' una isticmaal sidaad doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Astaamaha » Soo Degso Qalabkan Icon Adobe XD CC ee Bilaashka ah oo ay abuureen naqshadeeyayaasha halyeeyada
Sawir qaadaha godadka barafka ee Iceland